रोजगार खोज्नको लागि प्रार्थना गर्नुहोस् ➡️ ➡️ डिस्कभर अनलाइन ▷ ➡️
कामको लागि सोध्नु प्रार्थना
हामी सबैको लागि, हाम्रो जीवनको कुनै समय, आर्थिक कठिनाई अवधि आउँछ। केहीले आफ्नो जागिर राख्छन्, जे कमाउँछन् अब पर्याप्त हुँदैन; अरूले आफ्नो जागिर गुमाउँछन् र बकाया बिलहरुमा तनाव र निराशाको कारण खपत छन्। यदि तपाईं नराम्रो अवस्थामा जानुहुन्छ र काम चाहानुहुन्छ भने, हाम्रा भगवानलाई विश्वास गर्नुहोस् र एउटा बनाउनुहोस् जागिरको लागि सोध्नुहोस् हामी यहाँ देखाउँदैछौं।
1 जागिरको लागि प्रार्थना, भगवानमा भरोसा राख्नुहोस्
2 प्रार्थनाको महत्त्व
3 कसरी प्रार्थना गर्ने?
जागिरको लागि प्रार्थना, भगवानमा भरोसा राख्नुहोस्
यदि तपाईंको जीवनमा समस्याहरू छन् भने, हाम्रो सृष्टिकर्ता, परमेश्वरमा भरोसा राख्नु भन्दा उत्तम अरू केही छैन। जे होस्, उसले आफ्ना बच्चाहरूलाई कहिल्यै त्याग्दैन। यदि तपाईं आफ्नो जागिर चाहिन्छ वा तपाईंलाई चाहिने कुरा प्रदान गर्न त्यो जागिर पाउन सक्नुहुन्न भने विश्वासमा प्रार्थना गर्नुहोस्। यहाँ हामी तपाईंलाई निम्न वाक्य छोडछौं:
"प्रिय स्वर्गीय बुबा, येशूको नाममा, म तपाइँको बुद्धिको खोजी गर्दछु र मलाई भरोसा गर्दछु कि मलाई मेरो लागी सबैभन्दा राम्रो काम खोज्न निर्देशन दिनुहोस्। अब देखि म तपाइँको दया र सत्य को अधीनमा हिड्न चाहन्छु र, मेरो आफ्नै इच्छाहरु र सतही समझहरु को लागी झुकाई बिना।
मलाई राम्रो काम प्राप्त गर्न मद्दत गर्नुहोस् जुन मेरो आफ्नै हातले, मेरो लागि वा मलाई आफ्नै कोहि पनि अभाव छैन। हे बुबा, म चिन्ता वा चिन्तामा फिक्री गर्ने छैन किनकि मलाई लाग्छ तपाईको शान्ति मेरो हृदय र दिमागमा आयो।
तपाईं मेरो जीवित पानीको स्रोत हुनुहुन्छ, मलाई तपाईंको प्रोभिडेन्समा विश्वास छ र तपाईंले मलाई दिनुभयो बल दिनदिनै मेरो जीवनको उतार चढावहरूको सामना गर्न। हे बुबा, म तपाईंलाई धन्यवाद दिन्छु, मलाई तपाईको धन-सम्पत्ति अनुसार कामको लागि र हाम्रा प्रभुको महिमाको निम्ति।
हे भगवान, तपाईंको शक्ति आज मसँग काम खोज्न सक्छ। मलाई त्यो काममा लैजानुहोस् जुन म मेरो सारा प्राणले प्रेम गर्छु र माया गर्छु। सुरक्षित र खुशीको वातावरणमा सम्मान र सहयोगको वातावरणको साथ मलाई एक स्थानमा मार्गदर्शन गर्नुहोस्। मलाई मेरो लागि स्टोरमा रहेको नयाँ जागिरमा त्यो मानसिक र आध्यात्मिक सन्तुलन फेला पार्न मद्दत गर्नुहोस्।
धन्यबाद, प्रभु, मलाई सुन्नुभयो र आज मलाई मद्दत गर्नुभयो। जीवन सँधै सजिलो हुँदैन, तर म यो कुरा सम्झन प्रयास गर्दछु कि तपाईं मेरो जीवनको प्रत्येक क्षणमा मलाई मद्दत गर्न आउनुहुन्छ। धन्यका, तपाईका पवित्र नाम धन्यका होऊन्।
हाम्रो जीवनमा कठिनाइहरू कहिलेकाँही हामीलाई पराजित महसुस गराउँछन्। यस कारणले गर्दा, कहिलेकाँहि हामी सोच्छौं कि भगवानले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्न, जुन हामी गल्ती गर्छौं त्यो अनुचित हुन्छ। हामी विश्वास गर्छौं कि जतिसुकै हामी वरपरका मानिसहरूलाई हानि पु to्याउन हामी सकेनौं, हामी राम्रो छौं र हामीलाई के हुन्छ भनेर हामी योग्य छैनौं। यो सत्य हुन सक्छ, तर भगवानले हामीलाई वास्तवमै त्याग्नुहुन्न।
परमेश्वर आफ्ना छोराछोरीलाई बिर्सनुहुन्न, जसलाई उहाँले आफ्नो छवि र समानतामा सृष्टि गर्नुभयो। यद्यपि उल्टो सहि छ: उसको सिर्जनाले उहाँलाई बिर्सेछ, न्याय गर्नुहोस्। जब हामी नराम्रो समयमा हुन्छौं, हामीले यो बिर्सनु हुँदैन कि परमेश्वर सधैं हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। यद्यपि कतिपयले जिद्दी गरे पनि यो हामीलाई होइन जसले हामीलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा राख्दछ, बरु यसलाई रोक्नको लागि उसको इच्छा हो।
माथिको कारणले, आफूलाई परमेश्वरबाट अलग न गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। कठिनाइहरूले हाम्रो भक्ति, हाम्रो विश्वासलाई असर गर्न सक्छ, तर हामीले त्यसलाई एक उच्च तहमा पुग्न अनुमति दिनु हुँदैन। परमेश्वरसँग कुराकानी गर्नु भनेको हाम्रो आत्मालाई शुद्ध राख्नु हो, यो उहाँको आशिष्‌ र सुरक्षामा निर्भर छ।
यहाँ प्रार्थना महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनकि यो त्यस्तै कुरा हो जुन उहाँको आफ्नै छोरा, येशूद्वारा गर्ने आदेश दिइएको थियो। प्रार्थना नगर्नु व्यावहारिक रूपमा भगवानलाई बताउनु जस्तै हो जुन हामीलाई आवश्यक छैन। हामी भगवान बिना धन पाउन सक्छौं, हामी शक्ति पाउन सक्छौं, हामी सफल हुन सक्छौं, उहाँविना जे भए पनि। तर यो नबिर्सनुहोस् कि हामीसँग उहाँको आशिष छैन, न उहाँको सुरक्षा, हामी स्वार्थी हुनेछौं।
यदि तपाईंसँग ब्यापार छ र तपाईं यसको विकास र आर्थिक भविष्यको लागि प्रार्थना गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंलाई यो पढ्नमा रुचि हुन सक्छ सेन्ट म्याथ्यूलाई प्रार्थना.
कसरी प्रार्थना गर्ने?
येशू, प्रेरितहरू, भजनसंग्रहका लेखकहरू, अगमवक्ताहरू, सबैलाई प्रार्थना गर्न आज्ञा गर्दछन्। प्रार्थना भनेको हाम्रो आत्माको रगतजस्तै हो। हामी किन आश्चर्य गर्छौं संसार यो यति धेरै, नकारात्मक रूपमा परिवर्तन भएको छ, किन यति चिन्ता, धेरै चिन्ता, तनाव र यस कारणले गर्दा, बिमारीहरू छन्। धेरै क्याथोलिकहरू, इसाईहरू र अन्य हुन्, तर धेरै मानिसहरू तिनीहरूबाट जो परमेश्वरबाट टाढा छन्। जसले प्रार्थना गर्दछ उसले पाप गर्दैन; तर जसले पाप गर्दछ उसले प्रार्थना गर्दैन। चिन्ता र तनावको उपचार ईश्वरमा भरोसा राख्दछ, उहाँसँग कुराकानी गर्न प्रार्थना गर्नुहोस्।
प्रार्थना गर्न, एक रोजगार प्राप्त गर्न मात्र होइन जुनसुकैको लागि, पहिलो कुरा विश्वास हो। विश्वास र राम्रो इरादा राख्नुहोस्। हामी ठूलो धन जम्मा गर्न वा व्यक्तिगत तवरमा बोल्ने कुराको चाहाना पाउनको लागि सोध्दैनौं। हामी हामीलाई के चाहिन्छ भनेर सोध्छौं, हाम्रो debtsण तिर्न सक्षम हुनको लागि पर्याप्त छ, आफन्तहरूको लागि प्रदान गर्न सक्षम हुन, एक सभ्य र मर्यादित जीवनको जीवन पाउन। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो, परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुने उद्देश्यसहित उहाँको इच्छा पूरा गर्न सकौं।
प्रार्थना प्रभावकारी हुन, यो हृदयबाट मात्र गर्नु हुँदैन, जोड दिन पनि आवश्यक छ। जसरी येशूले एउटा अज्ञात साथीको बारेमा दृष्टान्तमा भन्नुभएको थियोः
«मान्नुहोस् कि तपाइँ मध्ये एक को साथी छ र तपाइँ उसलाई मध्यरात मा फर्काउनुहुन्छ, भन्नु हुन्छ:" साथी, मलाई तीन रोटी उधारो, किनकि मेरो एक साथी यात्रा बाट आएको थियो र म उसलाई प्रस्ताव गर्न को लागी केहि छैन ", र भित्र बाट उसले जवाफ दिन्छ। : Me मलाई परेशान नगर्नुहोस्; अब ढोका बन्द छ, र मेरा बच्चाहरु र म ओछ्यानमा छौं। म तिमिलाई दिन को लागी उठ्न सक्दिन। म तिमीलाई आश्वासन दिन्छु कि यदि ऊ तिमीलाई यो दिन को लागी उठ्दैन किनकि ऊ तिम्रो साथी हो, ऊ कम्तीमा तपाइँको जिद्दीको कारण उठ्नेछ र तपाइँलाई चाहिने सबै कुरा दिनेछ। मँ तपाइँलाई आश्वासन दिन्छु: सोध्नुहोस् र यो तपाइँलाई दिइनेछ, खोज्नुहोस् र तपाइँ भेट्टाउनुहुनेछ, ढकढक र यो तपाइँको लागी खोलिनेछ। किनकि माग्नेले पाउँछ; यदि तपाइँ खोजी गर्नुहुन्छ तपाइँ पाउनुहुनेछ; र फोन गर्ने को लागी, यो खोलिनेछ। (लूका ११, ५, १०)
हामीले प्राप्त गर्न माग्दछौं भनेर येशूले भन्नुभएझैं, हामीले विश्वास र ईश्वरको मदतको लागि आग्रह गरेर प्रार्थना गर्नै पर्छ। यो बिर्सनु हुँदैन कि थप रूपमा, हामीसंग उत्तम स्वभाव हुनुपर्दछ र हामीलाई चाहिएको कुराको लागि खोजीमा पनि जोड दिनुपर्दछ।
गुवादालुपको भर्जिनको लागि गुलाब
पवित्र रोजारी शुक्रवार
पवित्र रोजारी बुधवार
एक मृतक को आत्मा को उन्नत गर्न प्रार्थना